Triveni Online - Page 376 of 432 - News of Nepal
जान्नैपर्ने कुरा ! किन चिलाउँछ योनी ?
September 9, 2018	Health 0
प्रायः सबैजसो महिलाहरु आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै क्षणमा योनी चिलाउने समस्याबाट गुज्रिएका हुन्छन् । कहिलेकाँहि यसो हुनु सामान्य भएपनि लामो समयसम्म चिलाइराख्नु वा बारम्बार चिलाइराख्नु भने राम्रो होइन । योनि चिलाउने समस्या धेरै कारणबाट हुन सक्छ । ती मध्ये प्रमुख कारण योनि राम्रोसँग सफा नगर्नाले यो समस्या उत्पन्न हुन …
ब्रेकफस्ट के कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । ब्रेकफास्टमा लिइने खानेकुरा गलत पर्दा स्वास्थ्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । खाजामा बिस्कुट, कुकिजको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आजैबाट छोडिहाल्नुस् । यसको प्रयोगले फ्याट बढाउनुका साथै पाचन प्रक्रियामा पनि असर पुर्‍याउँछ । बरु विकल्पमा फ्याट फ्री अन्डा, चनालगायतको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ …
बच्चा जन्मिएपछि महिलाहरू मोटाउने गरेका छन् । किन भने बच्चा जन्मिएपछि महिलाहरूको शरीरमा परिवर्तनहरू देखिन्छन् । बच्चाका लागि आमाको दुध बढाउने र आमालाई कमजोर हुन नदिन विभिन्न पौष्टिक तत्व हुने खानेकुरा खान दिइन्छ । त्यसले गर्दा महिलाको शरीर बढ्ने गर्छ । बच्चा जन्मिएका आमाका शरीरलाई घटाउन केही साधारण उपाय गरिएमा …
मोटो शरीरको तौल कसरी घटाउने ?
मोटोपनाबाट धेरै नेपालीहरू समस्यामा छन् । मोटोपनाकै कारण विभिन्न रोगहरू लाग्ने गरेका छन् । मोटोपना घटनाका लागि खानपिनमा सामान्य ध्यान दिने हो भने तौल वा मोटोपना घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि बेलुकाको खाना चाँडै खानुपर्छ । खाना खानेबित्तिकै सत्नुहुँदैन । खाना खाएको २ घन्टापछि मात्र सुत्नुपर्छ । खाना खानेबित्तिकै सुत्ने …
युरिक एसिड भएको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता बिरामीले रक्सी पिउन मिल्छ ?
शरीरभित्र पिउरिन भन्ने प्रोटिन टुक्रिएर युरिक एसिड उत्पादन हुन्छ । सामान्यतः ३ देखि ७ मिलिग्राम–डेसिलिटरसम्मको युरिक एसिड नर्मल मानिन्छ । जब युरिक एसिडको मात्रा ७ भन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई युरिक एसिड बढेको भनिन्छ । यसरी युरिक एसिड बढेपछि सामान्यतः खुट्टाको बुढीऔँलाको छेउमा अचानक दुख्ने तथा सुन्निने समस्या हुन्छ । राति …
कसिलो ब्रा लगाउँदा देखिन सक्छन् यस्ता गम्भीर समस्या
प्रायःजसो महिलाहरु कसिलो ब्रा लगाउन रुचाउँछन् । कसिलो ब्रा लगाउँदा स्तन कसिलोे र आकर्षक देखिने भएकाले महिलाहरुले यस्तो प्रकारको ब्रा लगाउँछन् । तर कतिपय अवस्थामा महिलाले साइजलाई वास्ता नगरिकन ब्रा लगाउँदा शरीरलाई धेरै असर गरिरहेको हुन्छ । कसिलो ब्राका कारणले गम्भीर किसिमको गर्दन तथा ढाड दुख्ने समस्या सृजना हुन सक्छ …
अब विस्तारै गर्मी महिना लाग्दैछ । गर्मी मौसममा शरीरबाट स्वाभाविक रुपमा पसिना आउँछ । पसिना आउँदा विशेषगरी काखी गन्हाउने समस्या सिर्जना हुन्छ । पसिनाले काखीलाई ओसिलो बनाउने र ओसिलो भागमा ब्याक्टेरियाहरु हुने हुँदा काखीबाट दुर्गन्ध आउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । काखीको दुर्गन्धलाई पर्फ्युमको बास्नाले भन्दा प्राकृतिक तवरले हटाउन उपयुक्त हुन्छ …
प्रजनन् विज्ञहरुले पुरुषहरुलाई मोबाइल फोनको दैनिक एक घण्टाको प्रयोगले पनि शुक्रकिटको गुणस्तर घट्ने र प्रजनन् क्षमतामा ह्रास आउने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ अनुसन्धानका अनुुसार मोबाइललाई अण्डाशयको नजिक राख्नाले शुक्रकिटको तहमा व्यापक ह्रास आउँछ । मोबाइल फोनको असर बारे पछिल्लो नतिजा आएपछि विज्ञहरुले मोबाइल फोनमा लत नबसाल्न आग्रह गरेका छन् …
निन्द्रा लाग्दैन ? अपनाउनुस् यी उपाय
रातमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या धेरैलाई हुन्छ । विशेष गरी युवा युवती र धेरै तनाव लिने मानिसमा बढि हुन्छ । यसलाई ‘इन्सोम्निया’ भनिन्छ । पर्याप्त मात्रामा निन्द्रा नपुगे यसले शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक समस्या निम्त्याउँछ । इन्सोम्निया छोटो समयको लागि पनि पनि हुन सक्छ र लामो समयको लागि पनि । छोटो …
हात तथा खुुट्टाका जोर्नी दुख्छ र सुन्निन्छ भने त्यो बाथ रोग पनि हुन सक्छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसारको औषधी सेवन गरेमा यो निको हुुन्छ । तर यदि बाथ बढाउने खालका खाना खाइएको छैन भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अनुसन्धानमा पाइएको छ । बाथको लक्षण – जोर्नी दुख्ने तथा सुन्निने – …
Page 376 of 432« First...350360370«374375376377378	»	380390400...Last »